May 2019 - Page3of9- Glamorous Icon
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:२१
Monthly Archives: १५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:२१
Home›१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:२१›१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:२१ (Page 3)
एस स्टारर चलचित्र ‘केजीएफ’ले बक्स अफिसमा धमकेदार कमाई गर्यो । यो चलचित्रको व्यापारबाट उत्साहित हुदैँ निर्माण युनिटले यसको दोस्रो भाग निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो । पुन: बक्स अफिसमा तहल्का मच्चाउने सोच सहित अहिले यो चलचित्रको छायांकन भइरहेको छ । यस्तैमा ‘केजीएफ’को दोस्रो भागमा बलिउड नायिका रविना टण्डनको प्रवेश भएको समाचार अहिले निकै चर्चामा छ । ...
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:५५
फिल्म ‘रातो टिका निधारामा’ मा नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले नव-नायक अंकित खड्कासँग जोडी बाँधेकी छन् । अशोक शर्माको निर्माण तथा निर्देशन रहेको फिल्मको हाल छायाँकन भैरहेको छ । नव नायक शर्मासँग साम्राज्ञीको जोडी कस्तो देखिएला त ? दशैंसम्म रातो टिका निधारमाको प्रतिक्षा गरौं ।
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:४८
फिल्म ‘घामट शेरे’को छायाँकन सकिएको छ । सुरु गरेको ३८ दिनमा फिल्मको छायाँकन सकिएको निर्माता तथा निर्देशक हेमराज विसीले जानकारी दिए । फिल्मको सम्पूर्ण छायाँकन सुर्खेतमा गरिएको हो । छायाँकन सकिएसँगै निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्का स्टारर फिल्म ‘घामट शेरे’को प्रदर्शन मिति पनि तय गरिएको छ । ‘हामीले असोज ३ गते ‘घामट शेरे’ दर्शकमाझ ल्याउने ...
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:४४
रोहितसँग सलमानको सहकार्य
बलिउडका चर्चित नायक सलमान खान अहिले आफ्नो चलचित्र ‘भारत’को प्रचारमा व्यस्त छन् । प्रचारको क्रममा सलमानले धेरै अन्तरवार्ताहरु दिइरहेका छन् । यस्तैमा, हालै सलमानले एक अन्तरवार्तामा सफल निर्देशक रोहित सेट्ठीसँग मिलेर काम गर्न सक्ने बिषयमा बोलेका छन् । ‘के तपाई रोहित सेट्ठीसँग मिलेर काम गर्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा भनेका छन्–‘अहिले रोहितसँग काम गर्ने ...
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:४०
‘जात्रै जात्रा’का लागि अष्ट्रेलिया पुगे विपिन
जेठको ३ गतेबाट रिलिज भएको चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ले नेपालमा मात्र होइन, ओभरसिजमा पनि राम्रो कमाई गरिरहेको छ । अष्ट्रेलियामा यो चलचित्रको व्यापार झनै आक्रामक छ । यसैले पनि अष्ट्रेलियाका विभिन्न शहरमा हुने शोजका लागि यसको टिम अष्ट्रेलिया पुग्दैछ । नायक विपिन कार्की भने अष्ट्रेलिया पुगिसकेका छन् । यस्तै, नायिका वर्षा राउत पनि आजै अष्ट्रेलिया उड्दैछिन् ...
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:३७
चलचित्र ‘पोइ पर्यो काले’को छायांकन पोखराबाट सुरु गरिएको छ । पोखराको विन्दवासिनी मन्दिरमा पूजा गर्दै चलचित्रको छायांकन प्रारम्भ गरिएको हो । कमेडी कथामा बन्न लागेको यो चलचित्रमा सौगात मल्ल, पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, राजाराम पौडेल, श्रृष्टी श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । निर्माण टिमले दिएको जानकारी अनुसार, करिब १ महिना चलचित्रको छायांकन पोखरामा हुनेछ ...
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:३३
नेपाल आइडल पहिलो संस्करणमा उत्कृष्ट दश भित्र पर्न सफल उल्सन श्रेष्ठ र सन्ध्या जोशीले युगल गीत ल्याएका छन् । ‘तरकारी’ बोलको गीतमा शब्द तथा संगीत उल्सन स्वयमकै रहेको छ । टेकेन्द्र शाहको सम्पादन तथा निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा मञ्जिल बस्नेत र सारा शिर्पाइली फिचरिंग छन् । उल्सन र सन्ध्याले यसअघि पनि आफ्ना थुप्रै गीतहरु बजारमा ...
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:२४
Prince and Princess International Nepal 2019 completesThe domestic edition of International pageant related to variousage categories of children and teenagers called Prince and Princess International 2019 has been completed in Kathmandu.The event entitled as Prince and Princess International Nepal2019 was been conducted at Blue Star events venue, Tripureshwor, Kathmandu.In the grand finale of the event, ...
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:०७
नायिका बर्षा सिवाकोटीले आफुलाई बिबाह गर्ने रहर भएको खुलाएकी छन् । हातमा चुरा, गलामा पोते र सिउँदोमा सिन्दुर लगाएको फोटो राखेर बर्षाले रहर छ भन्दै लभ साइन राखेकी छन् । यस प्रकारको फोटो र क्याप्सनले के प्रष्ट हुन्छ भने बर्षालाई बिहेको रहर छ । तर बर्षाको यो रहर कहिले पुरा होला ? प्रतिक्षा गरौं । ...
चलचित्र ‘दे दे प्यार दे’ले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गरेपछि नायिका रकुलप्रित सिंह चर्चामा छिन् । विशेषगरि, उनको भूमिकालाई पनि दर्शकले रुचाएका छन् । उनी, साउथकी चलेकी नायिका हुन् भने बलिउडमा पनि उनको उपस्थिती बलियो हुँदैछ । तर, रकुलको एउटा तस्बिरले भने यतिबेला सामाजिक संजालमा खुबै चर्चा पाइरहेको छ । रकुलले एउटा बोल्ड फोटो शेयर ...